क्रोम: खोज ईन्जिनको साथ अधिक रमाईलो Martech Zone
क्रोम: खोज ईन्जिनको साथ अधिक रमाईलो
शनिबार, डिसेम्बर 12, 2009 बुधबार, जुन 7, 2017 Douglas Karr
अब कि क्रोम उपलब्ध छ म्याकको लागि, म यसलाई दिनभर गडबडी गर्दैछु र यसलाई पूर्ण रूपमा माया गर्छु। यसको साथ साइटहरूको समस्या निवारण गर्ने क्षमता अविश्वसनीय छ ... यो चाहे सीएसएस हो वा जाभास्क्रिप्ट मुद्दा हो।
एउटा चीज जुन म सँधै मेसेज गर्न चाहन्छु पूर्वनिर्धारित खोज इञ्जिन वा इन्जिनहरूको सूची हो - यो फायरफक्स वा हो भन्ने बाहेक सफारी। म मेरो आफ्नै साइटमा प्राय: पर्याप्त खोजी गर्दछु जुन म सामान्य रूपमा सूचीमा थप गर्दछु। थप रूपमा, यो रमाईहरूसँग लड्न (I वास्तवमा बिंग जस्तै!)।
मैले आफ्नै निर्माण पनि गरें खोज इञ्जिन फारम जोड्नुहोस् फायरफक्स को लागी चीजहरू सजिलो बनाउन। क्रोम एकदम सजिलो छैन, यसले फायरफक्सले गर्ने एडएन्जाइन कम्पोनेन्ट प्रयोग गर्दैन त्यसैले तपाईं केवल लिंक निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। साथै, खोज ईन्जिन छनौट गर्न कुनै ड्रपडाउन छैन।
जहाँसम्म, त्यहाँ ओम्निबारको साथ एक शानदार सुविधा छ ... तपाईं आफ्नो खोजको कुञ्जीशब्द खोज ईन्जिन थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसरी खोज इञ्जिन थप गर्ने:
कि त क्रोम प्राथमिकताहरूमा जानुहोस् र खोज इञ्जिनमा प्रबन्धन क्लिक गर्नुहोस् वा ओम्निबारमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र खोजी इन्जिनहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
खोजी ईन्जिन वा साइटको नाम खोजी गर्नुहोस् जुन तपाईं खोजी गर्न चाहानुहुन्छ, सजिलै फरक पार्न एक कुञ्जी शब्द, र खोज इञ्जिन यूआरएल खोजी सर्तको रूपमा% s को साथ। यहाँ छचा संग एक उदाहरण छ:
अब, म केवल "चाचा" टाइप गर्न सक्छु र मेरो क्वेरी र क्रोमले स्वचालित रूपमा यूआरएल इन्कोड गर्नेछ र यसलाई पठाउँदछ। यो वास्तवमा ड्रपडाउन हिट गर्नु र खोज इञ्जिन चयन गर्नु भन्दा धेरै सजिलो छ। मसँग मेरो खोज ईन्जिनहरू मध्ये प्रत्येकलाई खोजिएको छ ... गुगल, बिंग, याहू, चाचा, ब्लग… र द्रुत परिणामहरू प्राप्त गर्न ओम्निबार प्रयोग गर्नुहोस्! एकचोटि तपाईंले टाइप गर्न शुरू गर्नुभयो, क्रोम स्वत: पूर्ण र खोजी जानकारी प्रदान गर्दछ:
तपाईं पनि सक्नुहुन्छ ओम्निबार प्रयोग गरेर तपाईंको ट्विटर स्थिति अपडेट गर्नुहोस् ट्विटर एक ट्वीट popula गर्न क्वेस्ट्रिring विधि छ। वा तपाइँ ट्विटर सर्चको साथ खोजशब्द सर्टकट थप्न सक्नुहुन्छ http://search.twitter.com/search?q=%s.
प्रकटीकरण: ChaCha मेरो एक ग्राहक हो तिनीहरूले केहि अविश्वसनीय परिणामहरू पाएका छन्, यद्यपि ... विशेष गरी जब तपाईं ठेगाना, फोन नम्बर, ट्रिभिया प्रश्न, वा अझ राम्रो… चुटकुले जस्तो केहि सरल खोज्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूसँग सेलिब्रेटीहरू र शीर्षकहरूमा केहि अविश्वसनीय रूपमा शक्तिशाली पृष्ठहरू छन्।
टैग: ब्राउजरChromeगुगल क्रोम
२०१०: फिल्टर, निजीकृत, अनुकूलन